Jaaliyadda Somalida Ethiopia oo Dooratey Maamul Jaaliyadeed. - Cakaara News
Jaaliyadda Somalida Ethiopia oo Dooratey Maamul Jaaliyadeed.
MN(CN) Kulan aad loogu soo abaabulay oo ka dhacay hoolka Cashada iyo shirarka ee Mogadisho Mall ayaa waxaa ka soo qeyb galey dhamaanba urur bulsheedyada kala duwan ee Jaaliyada, salaadiin, ugaasyo, aqoonyahan iyo xubno badan oo ka tirsan Jaaliyada Somalida Ethiopia ee Minnesota.
Waxaa si dhaba loo gorfeeyay taariikhdii isku day Maamul mideeya Jaaliyada iyo duruufihii caqabadaha ku noqdey oo wax laga bartey dhabna loo gartey in guul iyo wadajir hore loogu socdo.Shirkan oo uu si farsan xidhiidhinayay. Guddoomiyaha Guurtida SE, Abdi Badal Shuuriye.Waxaana shirka si rasmi u furey Xubin ka mida Guurtida, Abdinur Fay, oo aayadaha quraanka ah ku furey. Duco, waano iyo dardaaranna si qurux badan ugu hibeeyay.
Waxaa raaciyey Murti iyo dardaaran xubno badan oo ka tirsan Guurtida oo ay ka mid yihiin Guddoomiye ku xigeenka Guurtida Abdikarim Muhumed, Xubin –caaqil Mohamed Mumin iyo Xubin – caaqil Farah Abdi Hirsi